WAA BARE DHANBAALKII (Maanso) - WardheerNews
WAA BARE DHANBAALKII (Maanso)
W.T. Macalin, Maxamuud Cali Aadan “Hoorri”
Baruhu waa bud-dhiggaha, horseedaha, hoggaamiyaha iyo tilmaamaha seeska jiritaanka ummadaha. Marna waa halbowlaha haba, tallaala, waraabsha geedka horumarka iyo ilayska geeddi-scodka nololeed. Bulsho kasta oo gaarta tanaad iyo tisqaad nololeed ogow waa bulsho tixgelisa “baraha”. Sidoo kale, bulsho kasta oo hoos uga dhacda dhabbaha guusha kuna hoos noqota burburkeeda ogow waa bulsho liidda, bahdisha, ogayn qiimaha “baraha”.
Haddaba maansadani waa mid kuu iftiiminaysa kaalinta uu leeyahay macalinku, marna waa tibaax muujinaysa inuu yahay ababshe dhallaan, canqariye bulsho, kaabe horumarineed iyo makaab dhaqan dhaxaleed. Toban gu’ ayaa ka soo wareegtey hilaaddii aan curiyey maansadan, welina waxa ay cushaa ama cidaad u tahay kasmada iyo kasiista aan dhex maaxo amin kasta. Waxa ayna tidhi saatan : –
Dhaqan side abwaankow,
Dhaad baan ku xirayoo,
Ma dhanbalin halkeedii,
Mana dhimin shenkeedee,
Mana dhumin tixdaydii,
Dhoon baan ku shubayo,
Dhitadii ku keydshee ,
Dheeha aan ka qaadee,
Wuxu gogol dhiggiiyahay,
Bare iyo dhanbaalkii.
Dhaaxa waa sugeynee,
Dhoolkan inoo da’ay,
Waa Bare dhanbaalkii.
Dadaal kaan dhudhuminee,
Dhan kas taba hanoqotee,
Noo dhalatay guushu e,
Waxa dhaliyey hadafkaa,
Dhallaan kooda naga dhigay,
Dhabar kooda nagu sidey,
Sida dheemman iyo luul,
Dhaayuhu ku darareen,
Lagu dhaafay hadimada,
Waxa soo dhakooloo,
Dhidibbada u taagoo,
Dhaliishana u diidoo,
Dhaqso soo abaabuley,
Dhalliney siday tahay,
Dhalliney wax lays baro,
Dhalliney wax lays faro,
Dhalliney wax loo kaco,
Dhabta aan ka hadalnee,
Dhalliney warkaa maqal,
Dhaqankiyo hiddaha iyo,
Dhanbaal kaad direysaan,
Dersi ay ka dheegtaan,
Dhaqan kana ka yeeshaan,
Gololada dhaclaha xiran,
Inta dhaqanka jecel iyo,
Inta dhiigga noo shubay,
Dhulkeeney u gaaryahay,
Dhaqan baan u leenahay,
Waa dhaxal awoowee,
Odayada sancada dhiga,
Dhurka jiilka noo baray,
Dhulka noo ilwaad furay,
Noo dhiibey oog kacay,
Naga dhiciyey cadowgee,
Dhakhso loo ogaadoo,
Biyihiiba laga dhuro,
Waxa dhaliyey guushaa,
Aaladaha is dhaafiyo,
Hawadaa dhex qaadee,
Dhegta qayb la saaree,
Badda qaar dhexqaade,
Buuraha dhulkaa mara,
Waa Bare dhan baalkii.
Dad caqliga dhitaystoo,
Dhankii aad ka eegtoba,
Dhaawaca ka jirayoo,
Waxa laga dhex helayaa ,
Kuwa geela noo dhaqa,
Kuwa gidirka dhiinkiyo,
Dhulka noogu soofshee,
Dhitadana guryaha dhiga,
Geedka dhowrta geeyee,
Oo dhakaalka noo sida,
Oo dhaarta noo maray,
Cadowguna ka dhuuntee,
Dhulka aan xaraashayn,
Kuwa dhuuxa noo shubay,
Kuwa dhaanka noo raray,
Kuwa dhaxanta naga raray,
Kuwa codowga naga dhigay,
Kuwa dhimirka noo furay,
Kuwa dheefta noo sida,
Dhiilahana noo tolay,
Dhulka siir ku beeree,
Dhuguc iyo bisayl kana,
Dhoomaha ka buuxshee,
Towxiid ku dhaqankiyo,
Lagu dhigo ardiyo geed,
Dhowr godlna loo qoro,
Ama labo dharaarood,
Dubaaqooda lagu dhigo,
La canqariyo dhimirkood,
Ka dhaadhicnta Nebigana,
Dhalad kiisa sooyaal,
Dhigaal loogu sama-falo,
Ku sar go’an dhab iyo xeel,
Dhacdo loogu sheegiyo,
Dhaxal ay u haystaan,
Ninna uusan dhiilliyo,
Sidii inu dhukaan yahay,
Ama uu dhabcaal iyo,
Dhoohane inuu yahay,
Dhalliney warkaa maqal ,
Dhudhunkii nin garabsada,
Dhaqankii ku weynyahay,
Marna aan ka dhoofayn,
Dhoobaduu ku noolyahay,
Dhul shisheeye aadayn,
Dhoof qaran ka doonayn,
Saxaraha ku dhimanayn,
Hoggaamiye dhulkii jira,
Ka ilaasha dheelliga,
Maatadiisa dhicin kara,
Duqaydiisa dhacan sada,
Marka cadow u soo dhaco,
Uga dhiga tis iyo teed,
Isagoo dhifdhiif qaba,
Dheefsada markuu rabo,
Waxa ka dhiiba goortaa,
Anna soo dhameeyoo,
Dhisay oo hagaajoo,
Dhidibbada u aasaye,
Ka ilaashey dheelliga,
Barashada ku dhaatoo,
Jahlinimo ka dhowroo,
Dhammaan tiin ka dhiidhiya,
Oo waxad dhex maaxdaan,
Waa Bare dhanbaakii.
Macalin, Maxamuud Cali Aadan “Hoorri”